ဦးကိုနီနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတင်လို့ ပြသနာရှာနေကြတယ် – ဦးကိုနီက သူ့ကိုဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့ သူတိုင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခဲ့တယ်-ဘယ်သူ့ကိုမှမငြင်း ခဲ့ဘူး | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Homeဦးကိုနီနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတင်လို့ ပြသနာရှာနေကြတယ် – ဦးကိုနီက သူ့ကိုဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့ သူတိုင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခဲ့တယ်-ဘယ်သူ့ကိုမှမငြင်း ခဲ့ဘူး
ဦးကိုနီနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတင်လို့ ပြသနာရှာနေကြတယ် – ဦးကိုနီက သူ့ကိုဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့ သူတိုင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခဲ့တယ်-ဘယ်သူ့ကိုမှမငြင်း ခဲ့ဘူး
February 9, 2017 February 9, 2017 drkokogyi
ဦးကိုနီ အလုပ်တွေလုပ်နေတုန်းက သူ့လုပ်ငန်း
နိုင်ဖို့အတွက် ပြသနာရပ်တိုင်းကို အရှိအတိုင်း အမှန်
ရှု့ဒေါင့်မျိုးစုံ ဘက်ပေါင်းစုံကစကားတွေကို နားထောင်ဖို့လိုတယ်
ဒါကြောင့် သူသွားလေရာမှာ လူတိုင်းနဲ့တွေ့တယ်
လူတိုင်းကို တိုင်းပြည်ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေ ကို
တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် သူနဲ့တွေ့သူတွေဖက်က
လူရှေ့သူရှေ့မှာ ပေါ်တင်လုပ်ခဲ့တာ ဗျောင်လုပ်ခဲ့တာ
အခု သူ မရှိတော့ဘူး
ဒီအချိ န်ရောက်မှ အာဇာနည်တယောက်နဲ့ တွေ့ခဲ့
ဆုံခဲ့ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးတယ်
ဆိုတာကို ဂုဏ်ယူလို့ ဦးကိုနီနဲ့အတူတွဲရိုက်ထားတဲ့
ဓာတ်ပုံတွေ တင်ခဲ့မိကြတယ် (ကျနော်အပါအဝင်)
ကျနော်တို့ဟာ အကြမ်းဖက်သမားတွေမဟုတ်ဘူး
လက်ရှိတိုင်းပြည်ကို အုပ်ချု ပ်နေသူတွေနဲ့ သဘော
မိမိ ကွန်မျူ နတီအတွက် တန်းတူအခွင့်အရေး ရဖို့
အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူအားလုံးအတွက် အရေးဆိုနေသူတွေသာဖြစ်တယ်
စစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်နေသူတွေသာဖြစ်တယ်
ကျနော်တို့အတွက်နဲ့ ဦးကိုနီ သိက္ခာကျစရာမရှိဘူး
ဘယ်သူကမှလဲ ဦးကိုနီကို သိက္ခာကျအောင်လုပ်လို့မရဘူး
မျိုးမစစ်တဲ့သူတွေက ပေါက်ပန်းသေးပြောနေတာ
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်လူတွေ ဆန်းဆန်းတင့်ဖြစ်နေတာ
ဂေါင်းလေးတွေ သုံးကြစမ်းပါဗျာ
← American dreams is excellent but Buddhist monk dreams brought the terrorism on Christians and Muslims
အာဇာနည်ကြီးဆရာဦးကိုနီ၏ကဘာရ် U Ko Ni’s grave and tombstone →
7 thoughts on “ဦးကိုနီနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတင်လို့ ပြသနာရှာနေကြတယ် – ဦးကိုနီက သူ့ကိုဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့ သူတိုင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခဲ့တယ်-ဘယ်သူ့ကိုမှမငြင်း ခဲ့ဘူး”
Mohammed Naeem လုပ်စားတွေ ခွင်ပျောက်မှာ ကြောက်နေကြတာ ဖြစ်မှာ ကျာကျာ။ အသိဥာဏ်ရှိတဲ့ လူတိုင်း ဆရာဦးကိုနီရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို တန်ဖိုးထားကြသူတွေချည်းပါပဲ။ တွဲရိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံကြောင့် အထင်မှားကြကြေးဆို ဦးတင်ဦးလို ပုဂ္ဂိုလ်​ ၀ီရသူလို အယုတ်တမာကို လက်ဆယ်ဖြာမိုးပြီး ရှိခိုးတာကို ဘာပြောကြမလဲ သိချင်မိတယ်။
Cademon Saw NSL ကမသိရင်အယုတ်တမာကြီးကျနေတာဘဲ…ဟို အစွန်းရောက်တွေကညစ်ပတ်ပြီးလုပ်ထာတဲ့ဟာ…အနောက်ကနေသံယောင်လိုက်နေတယ်…တကယ်ငတုန်းတွေ…
Mohammed Naeem အေးဗျာ..ကိုယ့်အထဲမှာ အဲ့လောက် ကျပ်မပြည့်တာတွေရှိနေသေးတာ အံ့သြပါရဲ့..
Maung Myomyint မလိုအပ်ဘဲပူပန်ကြတာက
Thet Htut Win ရိုနေဆန်းလွင်ကို မဟုတ်တန်းတရား ပြောနေသူတွေဟာ မျိုးချစ်ဘောမတွေ ၊ အရေခြုံဒီမိုတွေပါ ။ ပိုအံ့ဩတာက အပ္ပနားတချို့ပါ လိုက်ယောင်နေတာတွေ့ရတယ်။ ကျနော်ကတော့ ရိုနေဆန်းလွင်ဘက်ကပဲ ရပ်ပါတယ်။ သူ့ဘာသာ ဂုဏ်ယူပြီးရိုးရိုးသားသား တင်တာပါ။
Nay S. Lwin
I have no reason to deactivate my account which I run for advocating persecuted minorities, mostly for Rohingya.
It is completely weird showing as if deactivated. I can’t even catch the screen it shows session expired and immediately disappeared.
I am closely observing who are backbiting in this case. Will promptly kick out from my account once I can log in.
I have just consulted withasecurity specialist from an organization. Hopefully I will get back my account in next 72 hours.
Thet Htut Win ဟုတ်တယ် ကျနော်လည်းရှာတာမတွေ့တော့ဘူး ။ သူဟာ အစိုးရက လိမ်ပြီးပြောတာတောင် ပြန်ရှင်းရဲတဲ့သူပါ ။ ဘာမဟုတ်တဲ့ သူတွေကြောင့် မဒီပါဘူး 😀
Yes…even though Sitkhwes and DemoKhwes report on my FB account, as FB admins knew me (I complaint repeatedly to their biggest boss) MashaAllah they could not destroy my account. But sometimes, my hard hitting post by name: MAH, ASSK, Than Shwe were disappeared (because of numerous reports) from my timeline but not from the groups and my WP posts.
Arif Kassim အဲဒီ ကျော်စွာ ဆိုတဲ့
ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်တွေက အခု
ကိစ္စ လျှောက်ဖွာနေသူတွေ အားလုံး
ထောက်ပြုတ်အုပ်စု၊ ရဲမိုးတို့ အုပ်စု၊
ကျနော် မေးချင်တယ်။ ၀ီရသူ နှင့်
ဦးတင်ဦး၊ ခင့်ညွန့် နဲ့ ဝီရသူ၊ ၀ီရသူ
နှင့် ဒီကေဘီအေ ဓါတ်ပုံတွဲ ရိုက်တုန်း
ကလည်း ဒီလူတွေ အဲလိုဘဲ အန်အလ်ဒီ
ပါတီထဲက လူတွေ အစွန်းရောက် အတွေး
အခေါ်သမားတွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားတယ်
ဆိုပြီး ပွားဖူးလို့ လား။ စဉ်စားကြည့်ပါ။
သူတို့လျောက်ပြောတိုင်း ကျနော်တို့ က
လက်ခံရမှာလား။ ဘယ်သူ ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာ
ဘိုင်တို့ လည်းမြင်နေကြတာဘဲ။ ဒီလောက်လေး
တော့ ဘိုင် တို့ လည်း တွေးခေါ်တတ်မှာပါ။
Aung Zaw Htet မွတ်စလင်အားလုံး သိကြပါတယ်ဗျာ။ ခုက ကိုယ့် community ထဲက ဘယ်သူက ဘာပြောနေကြလို့တုန်းဗျာ ?
Arif Kassim ဦးကိုနီနဲ့ ဓါတ်ပုံ
တွဲရိုက်တာကို တင်ပေးလိုက်လို့ 
ရို နေဆန်းလွင်က ပြစ်မှုအကြီး
ကြီး ကျူးလွန်ထားသလိုလို၊ အဲဒီ
ဓါတ်ပုံက ဦးကိုနီရဲ့ ဂုဏ်ကို နိမ်အောင်
ကိုယ့် ကွန်မြူနိတြိထဲက တစ်ချို့လူကြီး
လူကောင်းဆိုသူတွေ အစ ပြောနေ ဆိုနေ
ရှောင်ပြေးသလိုလို၊ ပြစ်မှူးကြီး ကျူးလွန်ပြီး
ပုန်းနေသလိုလို ရေးနေတာတွေ ရှိပါတယ်
ဦးသိန်းစိန်တို့လို ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုကို ရက်ရက်စက်စက် မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်ဆက် သတ်ဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေ၊ တနည်းအားဖြင့် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက အလွန်ရွံရှာမုန်းတီးခဲ့ကြတဲ့ တိုင်းပြည်ကိုဂုတ်သွေးစုပ်ခဲ့ကြတဲ့ သူတွေနဲ့တောင် မင်းတို့ဂုဏ်ယူပြီး ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ကြ ကြွားဝါကြ။အားရပါးရ ပင့်ကြ မ,ကြပြီး ဖဘမှာ ပုံတင်ကြသေးတာပဲကွာ . . . ။
လူချစ်လူခင်များတဲ့သူတွေ၊ တိုင်းပြည်အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံပြီး ပေးဆပ်သွားသူတွေ၊ ဘာရာထူးနေရာ စည်းစိမ်မှမမက်မောတဲ့အပြင် မတရားဖမ်းဆီးအနှိပ်ဆက်ခံ(နောက်ဆုံးတော့ သတ်ပစ်ကြတာပဲ မဟုတ်လား)ရမှာကိုမကြောက်မရွံ၊ မင်းဆိုးမင်းယုတ် စနစ်ဆိုး စနစ်ယုတ်ကြီးကို ဒူးမထောက်လက်မမြှောက် အရှုံးမပေးပဲ ကြံကြံခံရင်ဆိုင်နေကြ/သွားကြတဲ့ လူထုသူရဲကောင်းတွေနဲ့ လူမျိုးအစုံ ဘာသာအစုံက ကျယ်ဝန်းတဲ့နယ်ပယ်အသီးသီးက နိုင်ငံတကာက လူပေါင်းစုံက ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ပြီးတင်ကြ သြဘာပေးကြ ကောင်းချီးပေးကြတာ မှားသလားကွ နာစရာလားကွ . . . ။
ရှက်ရမှာက သွေးစွန်းလက်တွေကို သောက်ရှက်မရှိလျှက်နေကြတဲ့ နှုတ်သီးတွေ. . . ပြင်ရမှာက ရှက်သင့်တာကိုမရှက်တတ်ကြတဲ့ သောက်ကျင့်တွေပဲ။